Covid-19 Vaccine Confidence Survey – (Language: Igbo) – Association of Nigerian Women Entrepreneurs and Professionals
ASSOCIATION OF NIGERIAN WOMEN ENTREPRENEURS & PROFESSIONALS
Covid 19 Vaccine Literacy
Empower Girls in STEM Coding Camp
Covid-19 Vaccine Confidence Survey
Choose Your Preferred Language To Fill Form
Dị ka ị maara, ọrịa kovid-19 egbuola ihe karịrị otu nde mmadụ na mba Amerịka ma metụtakwa ihe karịrị nde iri asatọ na atọ. Nke a mere ka ndụ siere ezinụlọ ike bụ ndị nke ha na – elekwasị anya dabara na ọdachi nje kovid a. Otú ANWEP-USA na njikọ aka ụlọ ọrụ CDC (Centre for Disease Control), ga-achọ ịbụ ụzọ mgbapụ na ịbagide ihe gbasara Kovid. Anyị ga-achọ ka inye aka inweta ozi nke ga-eme ka obodo nọrọ n’ahụ ike. Biko dejuputa obere ihe nnyocha nkeji iri a ime ka anyị mata ma ịgbaala ọgwụ mgbochi nje kovid-19.
Ọ bụrụ na igbabeghi, gịnị bụ ihe mgbochi gị ịgba ya na otu anyị ga-esi nye aka? Ụsa ọbụla e nwetara ga-adị na nzuzo n’ihi ya nwere onwe gị iweta ozi zuru okè. Nzaghachi gị ga-enyere anyị aka mebe ihe ga-eme ka ndị Afrịka na-abata mba Texas bụrụ ndị ga-enweta ọgwụ mgbochi megide nje KOVID-19.
I gbaala ọgwụ mgbochi?
Onweghi ihe m ga-ekwu
Ọ bụrụ eee, a gbaala gị otú ọnụ ọgwụ maọbụ karịa nke ọgwụ mgbochi nje KOVID-19? Lebaa anya n'ihe ndị a so ya :
Ọnụ ọgwụ nke mbụ
Ọnụ ọgwụ nke abụọ
Nkwalite nke mbụ
Nkwalite nke abụọ
Ọ bụrụ na o nweghị, gịnị gbochiri gị ịnata ọgwụ mgbochi a?
Enweghị ike inweta ndị na-agba ọgwụ mgbochi a
Echiche maka mmekpa ahụ ga-eso ịgba ọgwụ mgbochi a.
Enweghị ntụkwasị obi n'ebe ọgwụ mgbochi a dị.
Enweghị ntụkwasị obi n'ebe ndị na-ahụ maka ya dị.
Atụrụ dị iche iche nke nkwekọrịta ụgha.
Ahụghị m KOVID-19 dịka ihe egwu.
Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọzọ ị ga-ekwu na ajụjụ ndị a ajuburu biko kọwaa.
Olee etu anyị ga-esi nyere gị aka ịgba ọgwụ mgbochi megide nje Kovid - 19? Lebaa anya n'ihe ndị a so ya.
Mee ka ebe a ga-agba ọgwụ mgbochi a bụrụ ebe dị nso inweta.
Mee ka a mara na a gbaala ọgwụ mgbochi a na ìgwè nzikọrịta ozi nakwa n'ebe a nọrọ gbaa ya.
Ịkọwaa uru ọgwụ mgbochi bara /nakwa mmekpa ahụ so ya n'asụsụ nke m.
Ịkọwapụta ihe egwu so agaghị ọgwụ mgbochi a n'asụsụ nke m.
OGE A MỤRỤ ONYE MM123456789101112 / DD12345678910111213141516171819202122232425262728293031 / YYYY2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926192519241923192219211920
Olee akara nwoke maọbụ nwaanyị e nyere gị n'ọmụmụ gị, nke dị n'asambodo ọmụmụ gị nke abụghị ịjabu?
Onweghi ihe m ga-ekwu.
Onye ebee ka ị bụ?
Ị bụ onye asụsụ mbụ ya bụ Spain maọbụ Latin
Nke abụghị Spain maọbụ Latin.
Gịnị bụ agbụrụ gị?
Amerịka, India ka ị bụ onye Alaska.
Onye ojii ka ọ bụ Afrịka gwakọtara Amerịka?
Onye Hawaili ka ọ bụ agbụrụ ọzọ nke Pacifik Island.
Ihe ọzọ dị iche
Achọghị m ikwu.
Olee etu isi mara asụ asụsụ Bekee?
Amaghị m ncha
Amaghị m nke ọma
Nke ọma nke ọma
Olee obodo a mụrụ gị na mba ụwa?
Olee asụsụ ala nna gị?
Olee mpaghara ị bi n'obodo Texas?
Olee akara zip kodu ya?
Olee njirimara akụkụ ebe ị bi?
Ebe mepere emepe
Ebe nọ na imepe emepe.
Olee ogogo kacha elu nke mmụta akwụkwọ ị nwere?
Ọ pekata mpe ụlọ akwụkwọ dị elu
Ụlọ akwụkwọ dị elu maọbụ ọ dịka ya( dịka, GED)
Ụlọ akwụkwọ dị iche iche nke gụnyere digirii maọbụ ụlọ akwụkwọ ịzụ ahịa.
Digirii nke mbụ maọbụ nke dị elu karịa.
Olee otú n'ihe ndị kọwaa ọrụ ị na-arụ ugbu a?
Ịrụ nanị ọrụ nrụchalụ
Ịrụ ọrụ naanị onwe gị
Ịrụ ọrụ nrụchalụ nakwa nke onwe gị.
Nzere digirii maọbụ anaghị arụ ọrụ, ịkwụsị ọrụ nwa mgbe nta maọbụ ogologo oge.
Anaghị arụ ọrụ - iji aka gị were ezumike ọrụ otu afọ.
Anaghị arụ ọrụ - Onye a chụrụ n'ọrụ kpamkpam
Anaghị arụ ọrụ - a laala ezumike nká.
Anaghị arụ ọrụ - Nwata akwụkwọ.
Anaghị arụ ọrụ - - ihe ndị ọzọ.
Olee otú n'ihe ndị a kọwara ụlọ ọba ahịa ala nna gị?
Ọrụ ugbo, ịkụ osisi, ịkụ azụ, ịchụ nta, igwupụta ihe n'ala.
Ịmepụta ihe (nke gụnyere nri nakwa mmepụta ya)
Ịzụ ahịa n'ukwu.
Usoro ime njem maọbụ ịdoba ahịa na nnukwu ụlọ.
Ihe ndị bagsịrị mmadụ uru.
Mgbasa ozi (ụlọ mgbasa ozi na ìgwè mgbasa ozi)
Okpogho, inyefesi ihe n'aka, mmepe sitere n'ịrụ ọrụ, inye ihe n'obere ego maọbụ iwere ihe na nwa oge nta.
Ozi dị iche iche nke ọka, nkà na ụzụ.
Nhazi maọbụ nchịkwa /nlekọta ọrụ maọbụ mmadụ.
Nhazi ihe abaghị n'ihe.
Ije Ozi nke agum akwụkwọ.
Enyemaka ọha obodo ( ịmaatụ nri ọha obodo na ụlọ na igbo mkpa ọha obodo).
Ihe osise maọbụ ihe ọkpụkpụ, eme ndị mmadụ obi ụtọ maọbụ ebe ije ozi ezumike.
Ije ozi nri.
Ije ozi ndị ọzọ dịka ( ịrụzi ụgbọala, idozi isi)
Nlekọta ọha obodo
Ihe ndị ọzọ.
ASSOCIATION OF NIGERIAN WOMEN ENTREPRENEURS & PROFESSIONALS -USA
If you want to know more about our Covid-19 Education, Engagement and Outreach Program for African Immigrant Communities in Texas, or to join us in this effort as a Trusted Messenger, Outreach Ambassador or Volunteer, Subscribe to our mailing list to learn more.
+1 (469) 428-7997
Copyright © 2022 Association of Nigerian Women Entrepreneurs and Professionals
Website Design by Cyberdors